TPS South Sudan | ငါ၏အ TPS ကုန်ဆုံးလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်? | USAHello
TPS တောင်ဆူဒန် - သင့် TPS ကုန်ဆုံးလျှင်သင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်?
ဓာတ်ပုံ: Friends of the Lost Boys – DFW
Employment authorization documents (EAD) will be automatically extended to October 29, 2019, if you re-register. အဆိုပါကိုသွားပါ USCIS South Sudan page to check for information about EADs.
သံရုံး၏လိပ်စာဖြစ်ပါသည် 1015 31st St NW #300, ဝါရှင်တန်, DC က 20007.
ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်: (202) 293-7940.
The embassy hasapage for important notices for South Sudanese nationals အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ.